April 16, 2010 by chowutyee
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 19 Comments
ဟီးဟီး ရပါတယ်သူငယ်ချင်းရဲ့ 🙂
a hint ahint i miss that food…we always do that foods at thingyan 😦 😥
မှုံကြီးရေ.. စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့.. ကိုယ်နောက်နှစ်လာရင် ငါလုပ်ကျွေးပါ့မယ်.. 😉
နှစ်သစ်ကိုတော.ကူးပြောင်းခဲ.ပြီနော် နောက်ထပ် အသစ်အသစ်တွေကို စောင်.မျှော်နေပါတယ် ။ အလုပ်တွေများပြီး စာတွေမရေးနိုင်ရင်လဲး နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အဆင်ပြေမဲ. အချိန်တွေမှာတော. အသစ်အဆန်းလေးတွေ နဲ.ထိတွေခွင်ရပါစေ။
မ၀တ်ရည် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။ အေးချမ်ပါစေလို. ဆုတောင်းရင် နောက်ထပ် ကျိုးစာမှု.လေးတွေကို စောင်.မျှော်နေပါတယ် ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ………….
Hlaing ရေ မျှော့ချောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို ၀တ်ရည်လည်း မခေါ်တတ်ဘူး။ ပြီတော့ နုိူင်ငံခြားမှာလည်း ရှာရသိပ်လွယ်မယ် မထင်ဘူး.. ဆော်ရီးနော်… 😛
ဟုတ်ကဲ့ စမ်းကြည့်ပါနော်.. ရွှေရင်အေးဆို ၀တ်ရည်က သိပ်ကြိုက်တာ.. 😀